i-luxury apartaest stratum 5 kwiingingqi ezise-villavo - I-Airbnb
i-luxury apartaest stratum 5 kwiingingqi ezise-villavo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGustavo Adolfo
UGustavo Adolfo yi-Superhost
Igumbi elinobunewunewu eli-5 le studio kwi-¨IN¨ ebumelwaneni baseVillavicencio (Barrio Trapiche), enendawo yokupaka yabucala, ubuninzi babantu aba-3, ibhedi eyi-1 1.60 UBUMKANI besibini, ibhedi e-1 yesofa ekhululekile kakhulu, umntu wesithathu okhululekileyo, umgangatho ophezulu womoya. , ikhitshi elixhotyiswe ngezinto ezisisiseko, iibhalkhoni ezi-2, igumbi lokuhlambela eli-1. Isakhiwo sinedama lokuqubha, i-BBQ, i-jacuzzi, iindawo ezimanzi, uqwalaselo kunye ne-tv yesekethe evaliweyo, NGENXA YEMEKO EKUMILEYO YE-COVID EZIQHELEKILEYO ZINOKUNIKEZWA.
Indawo yokuhlala ye studio ikwindawo yosapho, indawo emnandi nethuleyo, ipholile kakhulu kwaye kude nengxolo, ipholile kakhulu ngokuba kufutshane nommandla weentaba, ndiziqhelanisa nokuphumla kunye nokwabelana ngexesha elimnandi kakhulu, inamakhethini kwaye imnyama ngaphandle. a ukuphumla ngcono ngexesha lokulala, 2 balcony kunye izitulo ukhululekile ukwabelana lokufunda okanye intetho kunye iwayini okanye ikofu elungileyo.
Indlu studio ibekwe kwindawo usapho, 1 block loans Trapiche gourmet isikwere, 1 block loans Trapiche Church, iibhloko ezi-3 ukusuka Primavera Shopping Centre, iibhloko-4 ukusuka Villacentro Shopping Centre kunye Llanocentro Shopping Centre, iibhloko ezi-6 ukusuka kwindawo Rosa de IVillavicencio, iibhloko ezi-3 ukusuka kwindlela edumileyo yeCarmen esetyenziswa yiVillavicences ukubaleka ngeeCawe.
Umbuki zindwendwe ngu- Gustavo Adolfo
Ewe, ngokuqinisekileyo, unxibelelwano oluthe ngqo ukuhlangabezana nokulindela, iingcebiso ezivela kwisixeko
Inombolo yomthetho: 125446